डाक्टर नेपालय – NepalayaNews.com
संसारको सबै तरकारी मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइदा गर्ने तरकारी : स्कुस १६ माघ २०७७, शुक्रबार १५:४८
नाकमा देखिने यी दुई लक्षण कोभिडको संकेत हुन सक्छ २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:३५
हालको समयमा धेरै व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्किन थालेकाले संक्रमित हुने सम्भावना पनि तीव्ररूपमा बढेको छ । पहिला सास फेर्दा गाह्रो हुने, ज्वरो तथा सुख्खा खोकीलाई कोभिड १९ को पहिलो संकेत मानिन्थ्यो । तर, कोभिड विभिन्न व्यक्तिमा बेग्लाबेग्लैरूपमा प्रस्तुत हुँदै..
अमेरिकामा दुई विरालामा पनि भेटियो कोरोना संक्रमण ११ बैशाख २०७७, बिहीबार ११:०७
११ बैशाख,अमेरिका । अमेरिकाको न्युयोर्कमा दुई घरपालुवा बिरालोमा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको छ । यी बिरालोको टेस्टको नतिजा बुधबार आएको हो । सिडिसीका अधिकारीहरुले यी दुवै बिरालो दुई भिन्न परिवारको भएको बताएका छन् । पहिलो पटक घरपालुवा बिरालोमा पनि..
डा. केसीले लिए अनसन फिर्ता । २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १३:३८
२६, काठमाडौँ । विभिन्न माग राख्दै अनसनरत प्रा.डा गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन तोडेका छन् । डा. केसीले सातबुँदे माग राख्दै कात्तिक १७ गते डडेलधुरामा १७औ अनसन सुरु गरेका थिए । अनसनको क्रममा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको कारण जिल्ला अस्पताल डडेलधुरामा भर्ना..
केरा औषधिको रुपमा लिन सकिन्छ ४ श्रावण २०७६, शनिबार ११:२५
एजेन्सी । केरामा पोषण तत्व पाइन्छ । केराको सेवन गर्नाले शरीरमा धेरै फाइदा गर्छ । केराको फाइदाका बारेमा तपाईले धेरै सुनेको पढेको हुनुहुन्छ होला । आयुर्वेदमा केराको सेवनलाई ऊर्जावर्धक र बलवर्धकको रूपमा लिने गरिएको छ । यदि तपाई केरा खानुहुन्न भने पनि यसको सेवन..
अमेरिकामा प्रसूतिजन्य मृत्युदर बढ्यो २८ बैशाख २०७६, शनिबार १५:२५
संयुक्तराज्य अमेरिकामा प्रसूतिजन्य मृत्युदर बढेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तो समस्या खासगरी अमेरिकाका कालाजातिका महिलामा बढी देखिएको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) का अनुसार सन् २०११ देखि २०१५ को अवधिमा ३ हजार ४०० भन्दा बढी महिलाको मृत्यु भएको..
टाउको दुख्ने समस्याबाट मुक्त हुने पाँच उपाय २४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०२:३४
हरेक मानिस आफू स्वस्थ रहन चाहन्छन् । तर, वातावरणीय प्रभाव, बदलिदो मौसम र मानसिक तनावलगायत विभिन्न कारण मानिसमा अन्य शारीरिक समस्या जस्तै टाउँको दुख्नु पनि एक हो । टाउकोको दुखाइलाई अंग्रेजीमा ‘माइग्रेन’ भनिन्छ । तर, सामान्य टाउको दुखाइलाई भने माइग्रेन भन्न..
रिट्ठाको दानाः दम रोगदेखि माइग्रेनसम्म ठीक पार्छ….. २४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०२:३१
रिट्ठा एक किसिमको फल हो जसलाई सुकाएर साबुन, डिटर्जेन्ट र श्याम्पू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । रिट्ठा र त्यसको पाउडर पनि सजिलै पाइन्छ । यसको प्रयोग कपाललाई बलियो र कालो बनाउनका लागि गरिन्छ अनि यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गर्छ । माइग्रेन माइग्रेन भएपछि..
ढाड दुख्ने समस्या छ ? कपुर हुनेछ अचूक औषधि ४ बैशाख २०७६, बुधबार ११:०८
कपुरको प्रयोग पूजापाठको लागी धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसलाई औषधिको रुपमा सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा विभिन्न बिरामीको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ । यदि कसैलाई दम रोगमा यो अचूक औषधि साबित हुनेछ । एक भाग फुराएको हिङमा एक भाग कपुर मिसिएर केराउको दाना..
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बाइडेनको ठूलो सफलता १६ माघ २०७७, शुक्रबार १५:४८
आखिर किन अमेरिकालाई फिटिक्कै मनपर्दैन साउदी अरबका युवराज सलमान ? १६ माघ २०७७, शुक्रबार १५:४८
मृगौला पिडित विकलाई अमेरिकाबाट ६ लाख सहयोग १६ माघ २०७७, शुक्रबार १५:४८